Posted by အင်ကြင်းသန့် at 2:59 PM
Happy New Year ပါ အင်ကြင်းရေ။ နှစ်သစ်မှာ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်နော့။ မငုံတို့ကို ခံစားချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀တော့ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ နှစ်သစ်မှာ ကြိုးစားလိုက်ကြဦးစို့. စာတွေလဲပြန်ရေးလေနော့ မငုံကို သတိရတာ ကျေးဇူးနော့
မင်္ဂလာပါ ဖေ့ဘွတ်မမ ခင်ဗျာ.. နှစ်သစ်မှာ အလှူအတန်းနဲ့ စတင်တော့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေ စုပုံ ရရှိနိုင်မှာပေါ့..
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ဂျင်းရေ.....
ဂျီးတော်က ကျုပ်တို့ကိုပစ်ထားပေမဲ့ ကျုပ်ကတော့ သတိတရနဲ့ လာရေပေသပေါ့လေ..
ညက ပွဲကတာ အတော်မှ မောသွားပြီလား...
နာကျင်စရာတွေ အကုန်ထားခဲ့ပြီးနှစ်သစ်မှာ အရာရာ အသစ်နဲ့ ပြန်စနိုင်ပါစေ... ဒါနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ဖုန်းနဲ့ ရိုက်တယ်သာ ပြောတာ ကောင်းလှချည်လား..
သူညားတွေက ဖုန်းအကောင်းကိုင်တယ်ဆိုတာ သိသာတယ်..း)
ကျုပ်တို့လို ၂ကျပ်တန်ဖုန်းမဟုတ်ဘူး ဟိဟိ
ကျုပ်ဘလော့ကို အသစ်ပြန်ချိန်ပြန်ဦး... Update မဖြစ်လို့...
ကုသိုလ်နဲ့စပြီး ကုသိုလ်နဲ့ဆုံးတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်စို့နော်။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သော နှစ်သစ် ၂၀၁၁ ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ငါ့ညီမရေ။
မျှော်လိုက်ရတာ မောလို့ ပေါ်လာပြန်တော့လည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ အများကြီးနဲ့ဆိုတော့ သာဓုခေါ်ပါတယ် နော်
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဘလော့ပို့စ်တွေ များများ ရေးပေးနိုင်ပါစေ
နှစ်သစ်ရဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
အလှူအတွက် သာဓု သာဓု သာဓု လို့ ခေါ်ရင်း ကုသိုလ်မျှယူသွားပါတယ်။
အလှူရေစက် လက်နဲ့ မကွာ လှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ...
နှစ်သစ်မှာ နေကောင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်နော်
အင်းးးးးးးခုမှပဲ ဖုန်တွေရှင်းပြီး blog လေးကဝင်းလာတော့တယ်...။ မဟုတ်ရင် သူကတော်တော်ကလေးကို ပျောက်နေတာဆိုတော့ :) သာဓုပါ ( သုံးကြိမ် ):)
ညီမလေးတောင် အဲဒီကို မသွားဖြစ်လိုက်ဖူး .. HAPPY NEW YEAR နော် ချစ်မမ .. :)
မမလည်း ခုမှပဲ စာပြန်ရေးဖြစ်တယ်နော် .. ညီမလေးလည်း ဖုန်တွေ သုတ်ပြီး စာပြန်ရေးနေပြီရှင့် .. :)
သာဓု သာဓု သာဓုပါ။ ခုမှအွန်လိုင်းတက်ဖြစ်လို့ နောက်ကျသွားတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီလိုပဲ အေးချမ်းတဲ့ပီတိတွေနဲ့လျှောက်နိုင်ပါစေနော်
သာဓု သာဓု သာဓုပါ။ ဆန္ဒရှိသလိုဖြစ်သော နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေ ဂျင်းစုတ်လေးရေ :)
စာပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတာနဲ့တင် မင်္ဂလာရှိသွားပြီး)
ဟက်ပီးနယူးရီးယား သတင်းကောင်းပါပဲ ဂျင်းခြစ်ရေ..။
သွားပီဗျ၊ ကျနော့် website account ပျက်သွားပီ၊ sign in လို့မရတော့ဘူး။ ။
ဂျင်းရေ..ပို့ စ်အသစ်တွေဘာတွေတက်လို့ ..၀မ်းသာတယ်သိလား..ဘလော့လေးကိုလဲ ပစ်မထားနဲ့ နော်..သနားပါတယ်.. :))))
သာဓု သာဓု သာဓုပါနော်... ပျော်စရာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
အာ ဂျင်းက ကျွန်တော့်ကိုကျတော့ မခေါ်ဘူး ...
အလှူအတန်းတွေရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုလည်း ခေါ်ပါဗျ ...
ကျွန်တော်က အပြင်လောကနဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာ ကြာပြီဗျ ...း)